Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Hawaii 6.1 Horohoron-tany tsapa tany amin'ny Nosy rehetra
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Tsy mitranga matetika izany fa misy eqarthquake any amin'ny State of Hawaii dia tsapa amin'ny nosy rehetra.
Andro tolakandro dia nisy nianjera iray nianatsimo tamin'ny Nosy Lehibe Hawaii.
Horohoron-tany 6.1 no refesina atsimon'ny Nosy Lehibe Hawaii anio tolakandro
Ny foiben'ilay horohorontany dia 17 kilaometatra atsimon'ny Nosy Lehibe Hawaii, saingy tsapa manerana ny Fanjakana
Ny seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo rehetra ao amin'ny State of Hawaii dia miasa
Ny Nosy Lehibe, indrindra taorian'ny fipoahan'ny volokano dia fantatra amin'ny horohorontany kely hatrany.
Androany anefa ny 6.1 dia tanjaka iray izay tsy refesina velively amin'ny Aloha Fanjakana.
Ireo mponina sy mpitsidika hatreto Honolulu dia nitatitra ny fihozongozona ny tany androany tolakandro.
Tsy misy tatitra momba ny ratra na fahasimbana lehibe amin'izao fotoana izao.
Tsy nisy ny fampandrenesana tsunami, saingy USGS kosa manara-maso ny zava-misy.